Ny saribakoly porcelain mahagaga sy marina an'i Marina Bychkova | Famoronana an-tserasera
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nanana fotoana lehibe nifankahitana izahay ireo zavaboary mahafinaritra manokana an'ny mpivady Kasia sy Jacek Anyszkiewicz. Un sanganasa miavaka hiditra ao an-tsain'i Kasia, iza no namorona ny zavaboary mahafinaritra rehetra.
Saika mitovy amin'ny zavaboary kely, na dia eto aza ny olombelona saribakoly porcelain noforonin'i Marina Bychkova, mpanakanto mpamorona firavaka sy firavaka monina any Canada. Faly i Bychkova amin'ireto tarehimarika porselana tena izy ireto izay mety hampatahotra kely noho ny asany sy ny endriny miavaka.
Mitondra antsika any amin'ny saribakoly i Marina ary maneho hevitra amin'ny fomba ny fitiavany mamorona azy ireo dia nanomboka tamin'ny 6 taona rehefa tsy tantiny intsony ny saribakoly mankaleo, antonony, novokarina betsaka. Noho izany dia nanomboka namorona ny kilalaony i Marina izay mifanaraka amin'ny idealy hatsarany manokana.
Rehefa nihalehibe izy dia niditra tao amin'ny Emily Carr Institute of Art and Design ary nitaona azy, nanomboka ny asany amin'ny famolavolana saribakoly. Nomeny anarana ny marika manokana nomeny azy avy amin'ny tantara fohy nataon'i Paul Gallico antsoina hoe "Enchanted Doll." Ny angano dia hita taratra amin'ny ankamaroan'ny sanganasany, satria matetika izy mamorona tarehin-angano fanta-daza toa an'i Little Red Riding Hood na Cinderella.
Ny saribakoly dia namboarina tamina metaly tsara avy amin'ny fitaovana avo lenta toy ny porselana, volafotsy, volamena ary koa kristaly Swarovski. Io dia mamela ny famoronana saribakoly tokana sy be pitsiny, izay miteraka filan'ny nofo sy fy amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Izany dia vokatr'izay izay mijery azy ireo dia faly amin'ny fisian'izy ireo fotsiny, satria manana asa sy fifandraisana mahafinaritra izy ireo.
Ianao dia manana asa bebe kokoa an'ny mpamorona ity hatramin'ny ny tranokalanao, Facebook o Instagram. Mpamorona tokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny saribakoly porcelain manaitra ny fiainana an'ity artista rosiana ity